Singabenzi bewotshi efanelekileyo, kwaye sibonelela ngeenkonzo zethu ze-OEM kunye ne-ODM.
Izinto eziqhelekileyo, i-MOQ yethu iziqwenga ezi-5 zabathengi abavavanya imakethi yabo, kunye nokwenza izinto ngokwezifiso, i-MOQ yethu yi-1000pcs. (Ukuba usetyenziso lokwenza ngokwezifiso yi-10k, sdk 5k).
Ngaba ndifumana isampuli yasimahla?
Isampulu yasimahla, singakufakela isicelo kwaye emva kokuba uhlawule kwaye uvavanye isampulu yethu, ukuba uya-odola iimveliso zobunzima, siya kubuyisa umrhumo wakho wesampulu kwintlawulo yobunzima.
Yintoni ixesha lakho lokuhlawula?
Kwi-odolo ze-alibaba, ungahlawula kwi-alibaba yorhwebo kwi-intanethi, ukuba akukho intanethi, i-T / T yamkelekile, idiphozithi engama-30% kunye ne-70% eseleyo ngaphambi kokuthunyelwa.
Ukuba isampulu sinesitokhwe ixesha lokuhanjiswa ziintsuku ezingama-1-3, kwaye kwii-odolo ezincinci ezingaphantsi kwe-500pcs, ziintsuku ezi-3-7, kunye noku-odolwa kwemveliso ngobuninzi malunga neentsuku ezili-15 ukuya kwezi-20, kuxhomekeke kubungakanani beodolo yakho.